ဒုံးလက်နက် ပြဿနာ ကို မီးစမွှေး ခဲ့သူ က မြောက်ကိုရီးယား အဏုမြူလက်နက် သည် မည်သူ့ကို မှ အကျိုး မရှိ ဟု ဆို | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဒုံးလက်နက် ပြဿနာ ကို မီးစမွှေး ခဲ့သူ က မြောက်ကိုရီးယား အဏုမြူလက်နက် သည် မည်သူ့ကို မှ အကျိုး မရှိ ဟု ဆို
ဧပြီလ ၆ ရက် ၂၀၁၃
ကျုးဘားခေါင်းဆောင် နှင့် သမ္မတ ဟောင်း ဖီဒယ် ကက်စထရို က မြောက်ကိုရီးယား အနေဖြင့် ညူကလီးယား လက်နက် ဖြင့် ခြိမ်းခြောက် မှု ပြဿနာကို ရှောင်ရှား ပြီး တည်တည် ငြိမ် ငြိမ် ရှိ ရန် ဒေသတွင်း နှင့် အမေရိကန် ကိုရန် လို မှု ကို ရှောင်ရှား ရန် ယနေ့တောင်း ဆို လိုက်သည်။
ကင်ဂျုံ အွန်း အနေ ဖြင့် ညူကလီးယား လက်နက် အသုံး ပြု ခဲ့ လျှင် တောင်ကိုရီးယား သာမက မြောက် ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ် တစ်ခုလုံး ပြုတ် ပြု တ် ပြုံး ပြီး အကျိုး မရှိ နိုင်ဟု ကျုးဘား ကွန်မြူ နစ် အာဘော် သတင်း စာ ဂရန်မာ တွင် ရေးသား ထား သည်။
အသက် ၈၆ နှစ် အရွယ် ရှိ ကျုးဘား ခေါင်းဆောင် ကတ်စထရို သည် ၁၉၆၂ခုနှစ် တွင် ဆိုဗီယက် က ညူကလီးယား ထိပ်ဖူး တပ် ဒုံးကျဉ်များ ကျုးဘား နိုင်ငံတွင် ချထား ရန် ရည် ရွယ်သည့် ကျုးဘား ဒုံးပျံ အရေး အခင်းတွင် အခရာ ကျ သူ ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် လက်ရှိ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံ အွန်း ၏ အဖိုးဖြစ်သူ ကင်အီဆွန်း နှင့် ရင်းနှီးသူ ဖြစ်သည်။
Share this:PrintTweetEmailShare on TumblrLike this:Like Loading...
This entry was posted on April 6, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အားတရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံသမ္မတ မစ္စတာရှီကျင့်ဖျင် ဂုဏ်ပြုကြိုဆို	သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်လျှောက်ထားသူများလိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်(၂၈)ချက် ထုတ်ပြန်… →
သစ္စာ	ငါ့စာဖတ်၍၊ မမြတ်တိုင်စေ၊
အကြံပြုချက်	PDF ဖိုင်များကို Mozilla Firefox ဖြင့် ဖတ်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး မြန်မာစာကို ကြည်ကြည်လင်လင် ထင်ထင်ရှားရှား ဖတ်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လူဖတ်အများဆုံးပို့စ်များ	သမိုင်း	အမေ့ခံလို့ မရတဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင်တို့၏ ပုံရိပ်များ	နောက်ဆုံးတင် ပို့စ်များ	ထူးဆန်းသောနည်းဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည့် ကမ္ဘာကျော်များ
Site Meter	Blog Stats	108,957 hits
Visitors’ Countries Since 4- 12- 2012, ဖတ်သူတို့ ဌာနေ	Meta	Register	Log in